Maitiro ekushandura nzira yekurodha yeSnapTube app? - LifeBytes | LifeBytes
Ungachinja sei yekurodha nzira yeiyo SnapTube app?
Networks muNetiweki | | Applications
SnapTube Vhidhiyo Downloader ndiyo yakanakisa yekurodha vhidhiyo kune ako arikushandisa eApple madivayiri. Iyo inobvumidza kurodha pasi kubva kune akasiyana mawebhusaiti senge YouTube, MetaCafe, DailyMotion pamwe neFacebook ne Instagram. Kunyangwe chiri chishandiso che android, hachiwanikwe muGoogle Play Chitoro. Icho chikonzero ndechekuti Google inorambidza zvese YouTube vhidhiyo kurodha pasi. Asi kune dzimwe nzira dziripo.
1 SnapTube Downloader App Zvimiro:
2 Ini ndinoshandura sei nzvimbo yekurodha pasi muiyo SnapTube app?
3 Maitiro ekuchinja nzira yekurodha pasi:
4 SnapTube inoshanda sei?
SnapTube Downloader App Zvimiro:
download Snaptube APK, inoshamisa mushandisi interface yeapp inobvumidza iwe kubata iyo yekurodha pasi zvakanaka.
SnapTube inouya nenzira dzakasiyana dzekumisikidza kuti ikurumidze kurodha pasi vhidhiyo.
SnapTube inopa yakasimba injini yekutsvaga pamwe neyechinyakare thumbnail mifananidzo.
Uye zvakare, inopa kurodha mavhidhiyo ane mhando ye60FPS uye resolution ye4K.
Kuti ikupe iwe nekukurumidza kurodha pasi, iko kushandisa kunoshandisa kwakawanda kubatana.
Iwe uchawana iyo webhusaiti yese munzvimbo imwechete.
Hapana kushambadzira kana pop-ups.
Unogona kurodha mavhidhiyo akavharirwa kubva kuYouTube.
Nyore, zvinokwanisika kushandura vhidhiyo faira kuita odhiyo imwe.
Basa rebhukumaki rinowanikwawo. Iwe unogona zvakare kugadzirisa akawanda kurodha pasi panguva imwe chete.
Ini ndinoshandura sei nzvimbo yekurodha pasi muiyo SnapTube app?
Ose mavhidhiyo eYouTube anochengetwa otomatiki akananga mukati mekuchengetedza kwemukati. Kuti uwane icho, unogona kutevera chinongedzo Chemukati chekuchengetedza> SnapTube> Vhidhiyo. Kana pasina nzvimbo yakakwana yasara mushure mekurodha pasi mavhidhiyo akawandisa, zvinogona kukanganisa mashandiro akanaka ezvimwe zvinoshandiswa. Chishandiso chako chinotanga kushanda zvishoma nezvishoma nekufamba kwenguva. Kuti udzivise iyi mamiriro, unogona kushandura nzira yekurodha yemavhidhiyo.
Maitiro ekuchinja nzira yekurodha pasi:
Vhura iyo SnapTube vhidhiyo downloader.
Iko kune giya icon pane yekumusoro kurudyi kona yekona. Dzvanya pairi kuti uvhure marongero.
Zvino, sarudza sarudzo «Dhawunirodha nzira».
Uye sarudza MicroSD kuchengetedza vhidhiyo kuchinhu chekunze kubva ikozvino.
Iwe unogona zvakare kugadzira yakasarudzika dhairekitori. Mukona yekumusoro kurudyi, pane iyo folda icon, tinya pairi.
Zvakare, ipe zita senge SnapTube uye uvhure nekuitepa kamwe chete.
Unofanirwa kuzvisimbisa nekudzvanya pa «Sarudza iyi folda». Iwe unogona zvakare kugadzira subfolder nekudzvanya iyo "Gadzira dhairekodhi nyowani" sarudzo.
Iko kunyorera kuchakubvunza zvakare kusimbiswa, tinya «Sarudza» kuti usimbise.
Ikozvino dhawunirodhi nzvimbo yashandurwa zvinobudirira kuita yekunze chengetedzo. Chekupedzisira, unogona kurodha pasi vhidhiyo usinganetseke nezve nzvimbo yekuchengetera.
Unogona kuridza vhidhiyo kubva kuGalari kana iwe unogona kutevedzera manenja File File> SD Kadhi> SnapTube. Ndizvozvo chete.
SnapTube inoshanda sei?
Sezvo zita rekushandisa rinotiudza kuti rinotorwa pasi nechinguva. Inoshanda zvakanyanya kuburikidza akasiyana enjini dzekutsvaga.
Chikamu Chekutsvaga: Chikamu Chekutsvaga chinokubatsira kuti uongorore zvaunoda zvemukati sezvaunogona kubatanidza kuburikidza nezvikamu gumi zvakasiyana. Semuenzaniso, mavhidhiyo anosetsa, nziyo, mifananidzo, nezvimwe. Kuti uchinje kubva pane chimwe chikamu uchienda pane chimwe, ingo shandura skrini kubva kuruboshwe uchienda kurudyi.
Kutsvaga kwemazwi: Kupfuura nekiyi yekutsvaga, iwe unogona zvakare kuwana mavhidhiyo aunoda. Mushure mekunge mawana izvo zvamunoda, munogona kurodha pasi nekuzvichengeta kuitira kuti muzotarisa gare gare.
Hit Trending: Iwe unogona zvakare kuwana inoteedzana uye inorova mavhidhiyo ane mimhanzi machati uye akawanda akawanda mune izvi.
Tinogona zvakare kutaura kuti SnapTube APP iri nyore kwazvo kushandisa uye nekukurumidza kurodha pasi. Kuti uwane iyo HD mhedzisiro, unogona kushandisa yayo yekutanga vhezheni kune chete $ 1.99. Ose ari maviri makwikwi ayo TubeMate, Vidmate kana Videoder (
download vhidhiyo pano) vane zvakafanana zvinoitwa, asi shanduko iri mune yayo ine simba kurodha interface ine dzakasiyana sarudzo. Tinofanira kutaura kuti iwe haugone kuwana iyi app kubva kuGoogle Play Store nekuda kwemitemo yekopiraiti.
Yakazara nzira kuchinyorwa: HupenyuBytes » Ungachinja sei yekurodha nzira yeiyo SnapTube app?
Shandisa zero rate yeCredomatic Costa Rica
Tora Credomatic Costa Rica Bac Card